Indlu yomenzi weKhabhinethi yeeNdwendwe uHakoya Hakoya, indawo yokulala yomenzi wekhabhathi ehlala kwisatoyama - I-Airbnb
Indlu yomenzi weKhabhinethi yeeNdwendwe uHakoya Hakoya, indawo yokulala yomenzi wekhabhathi ehlala kwisatoyama
Shiwa, Shiwa-gun, Iwate, Japan
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKido
Xa iyi-122 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Indlu yesatoyama ejikelezwe lunyawo olusentshona lweeNtaba zeKitakami
Intsimi apho unokonwaba ngokungenasiphelo
Ukuphumla njengendlu yesibini
Sebenza ngokukhululeka okanye udlale endle
Ndingathanda ukuba abantu abasezidolophini bafumane "enye ihlabathi nangona ikufuphi kakhulu".
Indlu yethu yeendwendwe isemaphandleni kwaye abamelwane baqelelene.
Iintsapho okanye abahlobo banokuchitha kamnandi apha njengekhaya lakho.
Intsimi yendalo emangalisayo ejikeleze indlu ikubonelela ngamava akhethekileyo.
Unokusebenza apha nge-WiFi yasimahla.
★ ☆ ★ Indlu yabahambi apho unokuchitha ixesha lokuphumla kwisakhiwo sabucala ★ ☆ ★
Ingqongwe ngamasimi apho kungaqokelelwa khona ukutya kwasendle okufana nezityalo zasendle, izityalo zasendle namandongomane, kunye nezitiya zemifuno ezingenazibulali zinambuzane.
Akukho kutya kunikwayo. Ikhitshi ixhotyiswe ngezixhobo zokupheka kunye netafile, ngoko zikhululeke ukuyisebenzisa. Ityuwa, iswekile kunye nesosi yesoya zihlala zikhona. Ukuba kukho enye into oyifunayo, nceda uqhagamshelane nathi.
Xa kukho imifuno kunye nezityalo zasendle kwigadi yemifuno engenazibulali zinambuzane, ungazivuna uzitye ngokwakho. Irayisi, iti yeqabunga le-mulberry, ijam eyenziwe ngesandla, ikomityi yeramen, i-retort curry, njl.njl. zibekwe ekhitshini. Ukuba uyayisebenzisa, nceda uhlawule yonke imali xa ugoduka.
Ivenkile ekufutshane (iSeven-Eleven) ikumgama oziikhilomitha ezi-4 ukuya kwezi-5.
Indlu yethu yeendwendwe ingqongwe ngamasimi emifuno, amahlathi kunye neenduli apho unokuvuna imifuno yamaxesha onyaka engenazibulali zinambuzane kunye neentlobo ngeentlobo zokutya kwasendle.
Ngokusisiseko, nceda uze nezinto ozityayo neziselayo, kwaye uziphekele.Iivenkile kunye nemarike yamafama yasekuhlaleni imalunga ne-4-5km ukusuka apha.Irayisi (engaphekwanga), ikofu, iti eluhlaza, iti ye-mulberry, ijam eyenziwe ekhaya, Sinokubonelela nge-seasonings esisiseko, ukuba iyimfuneko.Ukuba utya into eshelufini, nceda uhlawule oko ukusebenzisileyo ngaphambi kokuba uhambe.Sinokubonelela ngezinongo ezisisiseko, ukuba ziyafuneka.
I-wifi ekhawulezayo – i-122 Mbps
Yindlu ye-satoyama apho unokuziva ubomi bokwenyani bezolimo zaseJapan kunye nelali yeentaba. Ijikelezwe ziintaba namasimi erayisi, imini iqala ngokuntyiloza kweentaka maxa wambi kuvakala nesandi sokufuya.
Uya kubuva ubomi bokwenyani belali yasentabeni yaseJapan. Indlu yeendwendwe ingqongwe ngamasimi erayisi. Ngamanye amaxesha uya kuqala usuku lwakho ngeetweets zeentaka, ngamanye amaxesha ngesandi sabalimi abasebenza nzima.
Umbuki zindwendwe ngu- Kido
Ukuba unqwenela, sinezicwangciso ezifana namava e-satoyama (umsebenzi wokulima, umsebenzi weentaba, umsebenzi wezandla, ukwenza iilekese zendawo ...) kunye neentetho zesilayidi kwishishini eliphambili leebhokisi zenqanawa. (Umxholo ungatshintsha ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka, ngoko nceda uqhagamshelane nathi xa ubhukisha.)
Umamkeli-ndwendwe uya kudibana nawe xa ufika. Ukuba ungathanda ukuzihlola, nceda usazise. Xa usuku logcino lukufuphi, singayivuyela into yokuba ungasazisa ixesha oqikelelweyo lokufika.
Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngayo nayiphi na enye into.
Iiyure zokuvula isifuba sedrowa ziqala ngo-10:00 ukuya ku-10:30 kusasa kwaye ukususela ngo-15:00 ukuya ku-15:30 pm yonke imihla.
Siya kukwamkela xa ufika emnyango Ukuba ukhetha ukungena ngokwakho, sazise ngomyalezo. Siyabulela ukuba usixelele ixesha lokufika kwakho.
Nceda usibuze nayiphi na imibuzo ukuba ufuna ulwazi oluthe vetshe.
Ixesha lokuvula iworkshop: 10: 00 ~ 10: 30am, 15: 00 ~ 15: 30pm (yonke imihla)
Ukuba unqwenela, sinezicwangciso ezifana namava e-satoyama (umsebenzi wokulima, umsebenzi weentaba, umsebenzi wezandla, ukwenza iilekese zendawo ...) kunye neentetho zesilayidi kwi…
Inombolo yomthetho: M030019004
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Shiwa, Shiwa-gun